के म मान्छे होइन र?
[2018-01-26 오전 7:54:00]
म जन्मेको देशमा परिवारको साथमै बसेर सपना पूरा गर्न सक्ने भए यति टाढाको देशमा आउने थिइन होला । जिविको पार्जनका लागि आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँ छोडेर कोरियामा मजदुरी गरि जिउन बाध्य प् मजदुर हुँ म ।
प्लास्टिकको घर, कन्टेनरमा मानिस बस्न सक्छ त्यो पनि लाखौ भाडा तिरेर ? तर पनि म ट्वाइलेट, बाथरुम, पानी नभएको र ४० डिग्री तापक्रम भएको थोत्रो कन्टेनर जस्को एउटा कोठामा चार चार जनाको दरले लाखबढी भाडा तिरेर बस्न विवस छु ।
कार्य स्थलमा धम्की, कुटपिट, गाली गलौच र अनेकन अभद्र व्यबहारको सामना गरिराखेको छु म । के म योन हिंसाको सिकार हुन, कुटपिट र गाली सहन कोरिया आएको हु त ?
सचिव प्रवासी मजदुर संगठन (एमटियु)